သတင်း - အိမ်တွင်းအပင်ကိုဘယ်လိုကျွေးရမလဲ။ LED စက်ရုံအလင်း!
သင်၏အိမ်အပင်များကိုမည်သို့ကျွေးမွေးရမည်နည်း။ LED စက်ရုံအလင်း!
လူတိုင်းသည်သူတို့၏အိမ်များတွင်အပင်အချို့ကိုစိုက်ပျိုးကြသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏အားလပ်ချိန်များတွင်ပတ် ၀ န်းကျင်ကစားနိုင်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှပနိုင်သည်။ သို့သော်လူတိုင်းတွင်အပင်များကိုဂရုစိုက်ရန်အချိန်နှင့်ခွန်အားမရှိပါ။
LED plant lamp သည်အထူးအလင်းရောင်ဖြစ်ပြီးအထူးရောင်စဉ်လှိုင်းအလျားနှင့်နေရောင်ခြည်ကို LED အလင်းထုတ်လွှတ်သောဒြပ်စင်များမှထုတ်လွှတ်သောအလင်းဖြင့်အစားထိုးရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအထူးမီးလုံးများဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်အပင်များအလင်းစုစည်းခြင်းကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်အပင်များ၏ကြီးထွားမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်သင့်လျော်သောအလင်းပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။
LED စက်ရုံအလင်းများသည်ရောင်စဉ်လှိုင်းအလျားကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးအလင်းအတွက်အပင်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုအပြည့်အ ၀ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ စက်ရုံအလင်းအတွက်လိုအပ်သောရောင်စဉ်လှိုင်းအလျားသည်များသောအားဖြင့် 400 ~ 720nm အတွင်းတွင်ရှိသည်။ အပင်များ၏ photosynthesis အတွက်အများဆုံး 400 ~ 520nm ၏အပြာအလင်းနှင့် 610 ~ 720nm ၏အနီအလင်းကိုအများဆုံးအထောက်အကူပြု။ အနီရောင်နှင့်အပြာလှိုင်းအလျား LED မီးလုံးများ၏လှိုင်းအလျားများသည်အပင်များကြီးထွားမှုကိုမြှင့်တင်ရန်သူတို့၏တိုးတက်မှုအတွက်သင့်တော်သောရောင်စဉ်လှိုင်းအလျားများနှင့်အပင်များကိုပေးနိုင်သောဤအကွာအဝေးတွင်ရှိသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ LED စက်ရုံအလင်းများတွင်စွမ်းအင်ချွေတာသောဂုဏ်သတ္တိများလည်းရှိသည် (မြင့်မားသော photoelectric conversion ထိရောက်စွာစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသည် fluorescent lamps ၁/၄၊ ဆိုဒီယမ် lamps ၁/၁၀)၊ ရောင်စဉ်တန်းညှိနိုင်ခြင်း၊ ကောင်းသောအချက်ပြမီး၊ အအေးအလင်း (အနိမ့်) အပူ) အပူချိန်၊ အစိုဓာတ်ထိန်းနိုင်ခြင်း၊ အရွယ်အစားသေးငယ်ခြင်းနှင့်သက်တမ်းရှည် (နာရီ ၃၀,၀၀၀ ကျော်) ကဲ့သို့ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များ။
အိမ်ပြင်ရှိအပင်များ၏ကြီးထွားမှုအပြုအမူကိုလေ့လာခြင်းသည်largeရိယာကျယ်ပြန့်မှုရှိရုံသာမကမသေချာမရေရာသည့်အချက်များလည်းရှိသည်။ အိမ်တွင်းလုံးဝကွဲပြားခြားနားသည်။ မတူညီသောကြီးထွားမှုကာလများ၌အပင်တစ်ပင်စီသည်အဘယ်ပြofနာများလိုအပ်သည်၊ အဘယ်စိုထိုင်းဆ၊ အဘယ်အလင်းမျိုး၊ မည်သည့်အလင်းအရည်အသွေးသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ထွန်းနေသည်နှင့်မည်သည့်အခြေအနေများအောက်တွင်ပြောင်းလဲမှုအမျိုးမျိုးရှိသနည်း။ ဤအရေအတွက်အတိုင်းအတာများအရလူတို့၏လိုအပ်ချက်အလိုက်အမျိုးမျိုးသောအပင်များကိုကြီးထွားမှုအခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင်စိုက်နိုင်သည်။ အပင်မီးများသာအပင်များကိုအိမ်အပြင်ဘက်သို့လမ်းလျှောက်စေနိုင်သည်။ လက်ရှိတွင် LED စက်ရုံမီးများမှသာမိုးလုံလေလုံသုတေသနကိုအမြင့်ဆုံးထိရောက်စေသည်။
အပင်များ၏အလင်းအသုံးပြုမှုနှုန်းကိုထိရောက်စွာတိုးတက်စေရန်အလို့ငှာ LED စက်ရုံမီးများတပ်ဆင်ခြင်းသည်သိပ္ပံနည်းကျဖြစ်ရမည်။ စက်ရုံ၏အလင်းအားပြင်းထန်စေရန်စက်ရုံအလင်းကိုစက်ရုံနှင့်နီးကပ်စွာထားသင့်ပြီးအကွာအဝေးကိုစက်ရုံအလင်း၏စွမ်းအားအရသတ်မှတ်ထားသင့်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စက်ရုံမီးအိမ်နှင့်စက်ရုံအကြားအကွာအဝေးနီးကပ်လာလေအလင်းအသုံးပြုမှုစွမ်းရည်မြင့်လေလေဖြစ်သည်။ အလင်းဖြည့်ရန် LED စက်အလင်းကိုသုံးပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် LED တွင်အပူစွမ်းအင်အနည်းငယ်သာရှိပြီးအပင်များကိုလောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိသဖြင့်အနီးကပ်အကွာအဝေးတွင်ဓါတ်ရောင်ခြည်ပေးနိုင်သောကြောင့်အတိုဆုံးအကွာအဝေးသည် ၁၀ စင်တီမီတာရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် 8W ထက်နည်းသောစွမ်းအင်သုံးစက်ရုံမီးအတွက်, ဓါတ်ရောင်ခြည်အကွာအဝေးမှာ ၀.၅ မီတာခန့်ရှိပြီးစက်ရုံမီးများတွင် 8W ထက်ကြီးသောအတွက်အလင်းရောင်အကွာအဝေးသည် ၀.၇ မှ ၁ မီတာအထိရှိသည်။
ကြီးထွားမှုကာလနှင့်အပင်များ၏ကြီးထွားမှုအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ အလင်းဖြည့်ရန်အချိန်လိုအပ်သည်။ အလင်းသည်အားမနည်းသော်လည်းနေ၏အံ့ mat ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်သည့်အိမ်တွင်းရှိဖြည့်စွက်အချိန်သည် ၅ နာရီထက်မနည်းစေသင့်ပါ။ ၄ နာရီထက်နည်းသောအလင်းရောင်ရှိသည့်လသာဆောင်အတွက် (နံနက်တစ်ဝက်သို့မဟုတ်နေ့လည်တစ်ဝက်တွင်သာ) အချိန်ဖြည့်ချိန်သည် ၄ ​​နာရီထက်မနည်းစေသင့်သည်၊ နေရောင်ခြည်မရသည့်နေရောင်ခြည်မရသည့်နေရာများနှင့်မိုးလုံလေလုံareasရိယာများကို ၁၀ နာရီထက်မပိုသောအလင်းဖြင့်ပြည့်စေသင့်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အပင်ကြီးထွားမှုကာလအတွင်းအလင်းဖြည့်တင်းရန်အချိန်သည်ကြာကြာနေပြီးအိပ်ချိန်လည်းနည်းသည်။ မိုးအုံ့၊ မိုးရာသီနှင့်မြူဆိုင်းနေသောနေ့များတွင် ၁၀ နာရီထက်မနည်းထည့်သွင်းသင့်သည်။ သတိပြုရမည့်အချက်တစ်ခုမှာအပင်အများစုသည်တစ်နေ့တာအတွင်း photosynthesize နှင့်ညအချိန်တွင်ကြီးထွားလာသောကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ညတွင်အလင်းဖြည့်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ရာသီဥတု၊ ရာသီနှင့်အခြားအချက်များကြောင့်အပင်များ၏ကြီးထွားမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုသက်ရောက်သည့်အခါပုံမှန်အလင်းဖြစ်ထွန်းခြင်းအတွက်အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများသိုလှောင်ရန်အလင်းအလုံအလောက်မရှိခြင်း၊ ကြီးထွားမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုသည်ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲပြင်းထန်သောအခြေအနေများသည်သွေ့ခြောက်။ သေဆုံးနိုင်သည်။ LED စက်ရုံမီးများပေါ်ပေါက်လာသည်နှင့်အမျှအပင်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်နေရောင်ကိုသာအားကိုးနိုင်သည့်ကန့်သတ်ချက်ကိုဖယ်ရှားပစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သီးနှံအထွက်နှုန်းတိုးစေခြင်း၊ စက်ရုံကြီးထွားမှုသံသရာတိုစေခြင်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသော၊ ပမာဏကြီးမားသော၊